Qeybtii 3-aad Sheekooyinka lagu soo halqabsado ee murti ahaanta loo isticmaalo
BIDAARI MA QARSOONTO
Beri baa nin boqor ahaa oo boqortooyo weyn iyo hanti badan lahaa ayaa waxaa ku dhacay cudur, markuu waayo jiranayaa kadib ayuu cudurkii ka raystay, hase yeeshee timihii madaxa ayaa ka buubay, taasina aad buu uga xumaaday waxaana qeyb weyn ka luntay quruxdiisii maadaama timihii madoobaa ay ka daateen arrintaana ninkaasi aad buu uga xumaaday, wax kasta haddii uu isku dayey oo dawo kasta uu madixii mariyey timihii way soo noqon waayeen, waxayna dani ka geyn weyday inuu sameysto baruuko timihiisii u eg oo le'eg, sidaas ayuuna waayo badan dadkiisii ku xukumayey iyagoon ogeyn.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa sida boqorka caadadiisa aheyd wuxuu aaday ugaarsi, isagii iyo saaxiibadii iyo dad kale oo magaalada degen oo ku soo darsamay ayaa farto qaatay, sidii ay ugaarsigii ugu jireen ayaa iyagoo eryanaya Ugaadh waxaa ka hor timid dabeyl xoog badan, markaasay boqorkii timihii macmalka ahaa ka tuurtay oo ay bannaanka soo dhigtay bidaartii weyneyd iyo madaxiisii dhalaalayey dadkii oo dhan ayaa yaabay oo qosol baqdin leh hoos ka wada qoslay, waxayna isku dayeen inay ku caawiyaan boqorka inay dib ugu celiyaan buruukadiisa. Isagoo qosol gariiraya ayuu intuu baruukadii iska tuuray wuxuu yiri "Timihii Ilaahey ayaan madaxa ku celin waayaye ma kuwo macmal ah baan madaxa ku celin karaa"!!
Sheekadiina halkaas bay ku dhamaatay.
NINKII DADKA DAAWEYN JIRAY.
Beri bay waxay saboolnimo dhibtay nin, si wala hadduu yeelay noloshiisa caadiga ahyd wuu maareyn waayey, markii dambe si xun intuu u fekeray ayuu wuxuu isku dayey inuu is dilo. Buur dheer dhaladeed intuu fuulay ayuu iska soo tuuray. Hase yeeshee nasiib wanaag waxba ma gaarin, dhowr jeer ayuu ku noqday mar kasta isagoo bad qabay ayuu dhulka ku soo dhacaa oo waxba ma gaaraan. Markii dambe guri buu inta isku soo xiray ayuu xarig qoorta iska suray oo uu isku dal-dalay. Hase yeeshee mar kasta xarigii ayaa la soo go'a oo waxba ma noqdo. Waa nin aan tiisii geline maalintii dambe ayaa wuxuu ku tashaday inuu isku tuuro bad. Isagoo baddii agtaagan ayaa waxaa u yimid malag Ilaahey u soo diray markaasuu wuxuu yiri "nin yahaow maxaad rabtaa inaad sameyso". Wuxuu yiri "waxaan doonayaa inaan badda isku tuuro si aan u dhinto aan adduunkan dhaafo". Wuxuu ku yiri Malagii "oo maxaa taa kugu kalifay", wuxuu yiri ninkii "faqri baa I daashaday oo noloshaydii baan maareyn kari waayey" Malagii baa wuxuu ku yiri markaa "anigaa waxaad ku shaqaysato ku barayee ku shaqayso". Laga bilaabo maanta waxaad daweynaysaa dadka oo dhaqtar baad tahay, qofka jiran ee aad daweynayso haddii aan lugaha ka fadhiyo ku akhri wax oo dawey wuu raysanayaaye, haddiise aanmadaxa ka fadhiyo ka isku daalinin wuu dhimanayaaye" qof kasta oo jirana ku dheh aniga ayaa idiin daweynaya".
Nin saboolka ahaan jiray sidii ayuu muddo baan ku shaqaysan jiray, oo qofka marka loogu yeero ee la yiraahdo kaalay quraan ku akhri waxaa istusi jiray Malkul Mowdkii, hadduu lugaha ka fadhiyo xoolo badan buu ka qaadan jiray wuuna daweyn jiray, hadduu madaxa ka fadhiyana wuu isaga tagi jiray. Maalintii dambe ayuu isagii xanuunsaday show waqtigiisiibaa dhamaaday, wuxuuna arkay isagoo sariirtiisii ku jiifa malagii o madaxa ka fadhiya, markaasuu dadkii intuu u yeeray wuxuu ku yiri "I wareejiya oo madaxayga dhinacaa kale mariya" hase yeeshee markii madaxiisii la soo wareejiyey maliigiina wuu la soo wareegay oo weli madaxa ayuu ka fadhiyaa, si walba dhinac walba haddii loo jeediyey madaxa ayuun buu ka fadhiyasaa. Waxaanay dadkii arkeyn ee isagu kelidii uu arkayo ayuun baa u muuqda.
Siduu u lahaa ilmihiisii waryaada I wareejiya maxaad ii koertaagan tihiin ayey naftii ka baxday.
Qeytbtii 2-aad halkaan ka Aqriso